Altimeter & Altitude Widget Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Altimeter & Altitude Widget လေး
DS Altimeter သည်အမြင့်မီတာ၊ မြင့်မားသောမှတ်တမ်းနှင့်အမြင့်ပေမြေပုံဖြစ်သည်။ သင်၏အမြင့်ကိုပြသခြင်းနှင့်ခြေရာခံခြင်းအပြင် app သည်အခြားနေရာများအတွက်လည်းရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။
၁။ NASA's Shuttle Radar မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မစ်ရှင်မှတည်နေရာအခြေပြုအမြင့်.
၂။ ဂြိုလ်တုအခြေပြုအမြင့် (GPS altitude) သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့် (AMSL) ကိုပြင်ဆင်သည်။.
၄။ ဘာရိုမီတာအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့်ကိရိယာများသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်သို့ပြောင်းလဲသည့်ဖိအားအမြင့်ကိုရရှိနိုင်သည်။ အများဆုံးတိကျသောဖတ်ဘို့, ဖိအားအမြင့်ချိန်ညှိ.
barometric altimeter သည်စံကိုက်ညှိကိရိယာ (၄) ခုပေးသည်။
၁။ အနီးဆုံးလေဆိပ်သို့ချိန်ညှိပါ။ သင်၏လေဆိပ်ကိုအနီးဆုံးလေယာဉ်ကွင်းများအနီးရှိအက်ပလီကေးရှင်း၏စာရင်းမှရွေးချယ်ပါ။ လေယာဉ်ကွင်းဒေတာကိုပုံမှန်အားဖြင့်မိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ တိုင်းတွင်တိုင်းတာသည်
2. QNH တန်ဖိုးကိုထည့်ပါ။
၃။ သင်၏တည်နေရာအတွက်အခြေခံစံနှုန်း (လူသိများ) အမြင့်တန်ဖိုးကိုထည့်ပါ။
4. SRTM အမြင့်မြေပုံဆန့်ကျင် barometric altimeter ချိန်ညှိ။
DS Altimeter သည်အော့ဖ်လိုင်းတွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ barometric altitude နှင့် GPS altitude ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်သို့ရောက်သောအခါ internet connection မလိုအပ်ပါ။
DS IN ALTIMETER အသစ်:
●ဓာတ်ပုံ altimeter ။ သင်၏ဓာတ်ပုံတွင်ပြထားသည့်အမြင့်နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးမြင့်သောနေရာများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။
# မြေပုံပေါ်ရှိအချက် ၂ ချက်ကို နှိပ်၍ တည်နေရာနှစ်ခုကြားအမြင့်နှင့်တန်းကိုအလွယ်တကူရယူပါ။
# သင်အနှစ်သက်ဆုံးခရီးများ၊ အနိမ့်အမြင့်များနှင့်အကြားရှိအရာအားလုံးအတွက်အမြင့်မျက်နှာဖုံးနှင့်မြင့်သောလမ်းကြောင်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။
● [အထူး] သင်၏အမြင့်မှတ်တမ်းတင်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသောမြေပုံများပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသည့်လမ်းကြောင်းမှတ်အားလုံးပြပါ။ မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှတ်ကိုမဆို နှိပ်၍ အမြင့်ကိုရောက်ပါ။
# Elevation Search ။ နေရာအမည်သို့မဟုတ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ထိုနေရာတွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ရောက်ရှိပါ။
ပရိုဂရမ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်၎င်းအပါအဝင်နောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များပိုမိုရရှိစေရန်ရယူပါ Altimeter ဝစ်ဂျက်.
နှင်းလျှောစီးနေသလား သင့်ရဲ့နှင်းလျှောစီးပြေးလမ်းကို DS Altimeter ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပါ၊ ထို့နောက်သင်၏မြေအောက်လမ်းကြောင်းကို၎င်း၏မြင့်မားသောအချက်များနှင့်အတူမြေပုံများတွင်ကြည့်ပါ။ သင်၏ပြေးနိုင်မှုအတွက်အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအချက်များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလိမ့်မည်။
DS altimeter နှင့်အတူအမြင့်မြေပုံနှင့် bathymetry (အိုင်နှင့်ပင်လယ်အနက်) လည်းပါဝင်သည်။ ထိုနေရာတွင်အမြင့်သို့မဟုတ်ရေအနက်ကိုရှာဖွေရန်မြေပုံပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသာပုတ်ပါ။
●လျှောက်လွှာတွင်အသေးစိတ်အကူအညီကဏ္ section ပါဝင်သည်။
နှင်းလျှောစီး၊ တောင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်အခြားပြင်ပအားကစားများ၊ လှေများ၊ ရေကြောင်းသွားလာမှုများနှင့်မည်သည့်အချိန်၌မဆိုသင်၏မြင့်တက်မှုကိုသင်သိလိုသောအမြင့်ဆုံးမီတာ။
DS ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဖုန်း ID သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအကောင့်အချက်အလက်တို့ကဲ့သို့သောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမစုဆောင်းပါ။
GPS အတွက်လိုအပ်ပါက 1. တည်နေရာခွင့်ပြုချက်။ GPS အချက်အလက်များကိုမြေယာလေ့လာရေးအမြင့်နှင့်ကိုက်ညီရန်နှင့် Geoid အထက်မြင့်တက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။
၂။ သင်၏အမြင့်ရလဒ်၏ပုံကိုဝေမျှရန်ခွင့်ပြုသည့်မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းအတွက်ဓာတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
၃။ Altimeter Widget ပေါ်ရှိတန်ဖိုးများကိုပုံမှန်အားဖြင့် refresh လုပ်ရန်နှင့်ဖုန်းကို reboot / restart လုပ်သည့်အခါ Altimeter Widget ကိုပြန်လည်နိုးထစေဖို့ Wake-up phone (Wake-Lock) နဲ့ Boot Permission လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ လျှောက်လွှာကို ၀ ယ်ရန်၊ အမြင့်မီတာဝစ်ဂျက်ကိုသက်ဝင်စေရန်၊ ကြော်ငြာကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်အကန့်အသတ်မရှိသောအသံသွင်းထားရန်အတွက်ငွေတောင်းခံရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
6. တုန်ခါမှုခွင့်ပြုချက် - အရေးကြီးသောသတိပေးချက်များအတွက်ဖုန်းကိုတုန်ခါရန်။
* Fixed widget သည် Android 10 တွင်အသုံးမပြုနိုင်သောအရာနှင့် Android 10 အတွက်အခြား bug fixes များ။
* Google raster မြေပုံများကိုဖျက်သိမ်းပြီး Google vector map ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
* ယခုအခါ Android 10 အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ။
Altimeter & Altitude Widget လေး
DS Software များ | 📡
ဂျီပီအက်စ် Compass Explorer ကို